अनुहारमा दाग आएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय - ज्ञानविज्ञान
यदि तपाइँको अनुहारमा वर्षौदेखि रहिरहेको दाग हटाउन चाहनुहुन्छ भने अण्डा र महको फेसप्याक बनाएर अनुहारमा लगाउनुभयो भने त्यसले पुरै अनुहारको दाग मेटाउँछ र अनुहारमा चमक पैदा गर्छ ।
महमा एन्टीबायोटिक तत्व हुन्छ जसका कारण छालामा रहेका किटाणुहरुलाई नष्ट पार्छ र त्वचालाई स्वस्थ र सुन्दर बनाउन मद्दत गर्छ ।
एकवटा अण्डाको सेतो भागमा एक ठूलो चम्चा मह मिलाई पेष्ट बनाउने र पुरै अनुहारमा १०-१५ मिनेटसम्म मालिस गर्ने र त्यसपछि २० मिनेट जति त्यतिकै छाडिदिने र सफा पानीले धुने गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया हप्तामा दुई पटक गर्नु जरुरी हुन्छ । यसले तपाइँको अनुहारमा रहिरहेको पुराना दागहरु मेटाउन मद्दत गर्छ ।
अनुहार मात्र राम्रोब नाएर हुन्छ त ? यी कुरा थाहा पाउनुहोस्
हामी राम्रो वा नराम्रो भन्नसाथ, कसैको अनुहार सम्झन्छौं । मानौं, समग्र सौन्दर्यको पुञ्ज भनेकै अनुहार हुन् ।त्यही कारण धेरैजसो सौन्दर्य प्रसाधन पनि अनुहारकै लागि प्रयोग हुन्छन् । हामीलाई के लाग्छ भने, अनुहार राम्रो बनाउँनुपर्छ । अनुहार राम्रो बनाएपछि आफ्नो सौन्दर्य खुल्छ भन्ने भ्रम हामीलाई छ । यही भ्रमको कारण कतिले अनुहारलाई निकै मेहनतसाथ लिपपोत गर्छन्, यद्यपी उनीहरुको सौन्दर्यमा कहीँ कतै खोट देखिन्छ । आखिर किन होला ?
मानिसहरु अक्सर अनुहारलाई हेरेर व्यक्तिको सुन्दरताको वयान गर्छन् । जबकी कुनै पनि मानिसहरुको सुन्दरता उसको अनुहार मात्र हैन, शरीरको हरेक अंगसित जोडिएको हुन्छ । र, शरीरका सम्पूर्ण अंग सुन्दर भएमात्र मानिसको व्यक्तित्व खुल्छ । आकर्षक देखिन्छ । स्मार्ट देखिन्छ ।
यही सुन्दरतालाई कायम राख्न मानिसहरु अनेक प्रयास गर्दछन् । तर, अनुहारलाई सुन्दर बनाउने क्रममा मानिसहरु गर्दनमा ध्यान दिन भने अक्सर विर्सन्छन् । परिणामस्वरुप, कयौ पटक मानिसहरुको अनुहारमा भन्दा पहिले गर्दनमा चाउरीपना देखिन सुरु हुन्छ । र, यसलाई कम गर्नका लागि पनि गर्दनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
-गर्दन शरीरको यस्तो अंग मध्यमा पर्दछ, जुन हरसमय खुला रहन्छ । र, धुलो, धुवा तथा सुर्यको हानीकारक विकिरणले यसलाई प्रभाव पारिरहन्छ । त्यसैले, शरीरको सुरक्षाका लागि पनि यसको सुरक्षा गर्न तथा यसलाई हाइड्रेट गर्न आवश्यक छ ।
-प्रत्येक पटक बाहिर निस्कदा सनस्क्रिन तथा लोशनको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । किनकी समय अगावै छाला चाउरी पर्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको सुर्यको हानीकारक विकिरण पनि हो । त्यसैले, छालालाई स्वस्थ राख्न यस्ता विकिरणबाट बचाउनु जरुरी छ ।
-गर्दनको छालालाई कसिलो बनाउन घरेलु मास्क तथा प्याकको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । बजारमा पाइने विभिन्न किसिमको प्याकको तुलनामा घरमै तयार पारिएको प्याक सुरक्षित हुनुका साथै छालाको लागि राम्रो मानिन्छ ।
-गर्दंनको व्यायामले छालालाई कसिलो बनाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि योगा पनि गर्न सकिन्छ । योगाले छोटो समयमै छालालाई कसिलो बनाउन मद्दत गर्छ ।
– घाँटीको मसाजका लागि एन्टीअक्सिडेन्टयुक्त तेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । एन्टी अक्सिडेन्टयुक्त तेलमा नरिवल, जैतुन तथा बदामको तेल समावेश हुन्छ । यसले छालाको रुखोपना कम गर्नुका साथै छाला कसिलो बनाई छालाको चाउरीपन कम गर्छ ।
केही दिनमै अनुहार गोरो र चम्किलो बनाउने घरेलु उपायः
४.टमाटर र दही बराबर मात्रामा लिएर राम्ररी फिट्नुस् र यो मिश्रणलाई छालामा लगाएर १० मीनेटसम्म राख्नुस र चिसो पानीले धुनुहोस् । यो सनबर्नको लागि राम्रो तरीका हो।
मेकअप नगरी यसरी चम्किलो बनाउन सकिन्छ अनुहारः
योग नगरौ– अनुहारलाई स्क्रबरले दह्रोगरी रगड्नु हुँदैन तथा यसको धेरै प्र ।
– जहिलेपनि आफ्नो छालाको प्रकृति अनुसारमोश्चराइजर छनौट गरौं ।
Don't Miss it यस्ता छन् आँखा सम्बन्धी राेचक तथ्यहरू, जान्नुहोस्
Up Next आलुबखडा खानु भएकाे छ ? यस्ता छन् यसका फाइदा
शरीरलाई विकाररहित बनाउन यस्ता खाना खाने गर्नुपर्छ
गहुँको जमरा गहुँको जमरामा पाइने तत्वले एसिडिटी कम गर्ने, शरीरलाई विकाररहित बनाउने र कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने गर्छ । साथै यसले…
केहि यस्ता विधीहरु, जसले घाँटीको दुखाईमा प्रभावकारी उपचारको काम गर्छ
१. तुलसीको ६ वा ७ वटा पत्ता उमालेर दिनमा दुई वा तीन पटकसम्म पिउनुहोस् । २. मरिजलाई बदामसँग पिसेर सेवन…
कतिवेला पिउने पानी ?
एक दिनमा कति पनि पिउनुपर्छ भन्नेबारेमा मानिसहरूमा अनेक धारणा पाइन्छन् । पानी पिउने स्वस्थ बानीका बारेमा अनेक हल्ला पनि चलेका…